Rodion Ebbighausen – Biographien Projekt
စောဖားဒေး (မွေးသက္ကရာဇ် ၁၉၄၅ခုနှစ်) – KNU တိုက်စစ်မှုးတစ်ယောက်၏ ရုပ်ပုံ
စောဖား‌ဒေးသည် ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် အာရုံစိုက်ခံရခြင်းသည် သူ၏ကျော်ကြားမှု သို့မဟုတ် အ‌ရေးပါသောလူပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ၁၉၇၀ခုနှစ် မှ ၁၉၉၀ခုနှစ် အတွင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၏ တိုက်စစ်မှူးတစ်ဉီးဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ KNU (ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး) သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဖြစ်သောကရင်လူမျိုးများ၏ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း (များ) ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူဦးရေအချိုးအစားမှာ ၂.၅ မှ ၇ သန်းအထိ များပြားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းရှိ ဒေသများတွင်နေထိုင်ပြီး အုပ်စုခွဲ (၂၀) ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။ မိခင်ဘာသာစကားကို စကော နှင့် ပိုး ကရင်ဘာသာစကားများအဖြစ်ခွဲခြားထား ပြီး ယခင်က ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ‌နောက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းနယ်စပ်နှင့်နီးစပ်သော မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်ကြသည်။ အများစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်း‌တို့၏နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက်သည် ခရစ်ယာန်အထက်တန်းလွှာဦးဆောင်သော KNU၏ (အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ယနေ့တိုင်) လွှမ်းမိုးမှုရှိသောကြောင့် ကရင်လူမျိုးများသည် ခရစ်ယာန်များဖြစ်သည်ဟု အများအားဖြင့်ရှုမြင်လေ့ရှိသည်။ (Gravers 2014: 175)
စောဖားဒေးသည် ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်၊ ထူးချွန်သောတိုက်စစ်မှုုး တစ်‌ယောက် မဟုတ်ခဲ့သော်လည်း ကရင်အဖွဲ့များထဲမှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ ကရင်ခေါင်းဆောင်တစ်‌ယောက်ဖြစ်သည်။ သို့‌သော် ၎င်း‌၏ရိုးရှင်းလှစွာ‌သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည် ကျွနှ်ပ်၏စိတ်၀င်စားမှုကို ဆွဲဆောင်ထားပါသည်။ လူသိမများတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံလောက် ကျွန်တော်ထုတ်ပြချင်ပါတယ်။ ထိုအရာက စောဖား‌ဒေးကဲ့သို့ သမားရိုးကျမဟုတ်သည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတစ်ခုကို ပုံဖော်လိုသူများအတွက် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနဲ့နားလည်မှုကိုပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ သူ့လိုလူများမရှိလျှင် မည်သူမှ „အ‌ရေးပါသည်“ဟု ဆိုသော သူများ၏အကြောင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးရန် စိတ်ဝင်စားမည်မဟုတ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွန်ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သော မော်လမြိုင်မြို့တွင် ကျွန်ုပ်ကာလအတော်ကြာအောင် ကွင်းဆင်းသုတေသနပြုလုပ်နေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်၏အဓိကသတင်းပေးသူတစ်ဦးထံမှ သူ၏ အကြောင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Winterberger 2017: 10-12) စောဖား‌ဒေးသည် ထိုသူ၏ဦးလေးဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင် သူသည် ကျွနှ်ပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ခဲ့ပါ အဘယ်‌‌‌‌‌‌‌ကြောင့်ဆိုသော်ကျွနှ်ပ်၏သုတေသနပြုခြင်းတွင် ကရင်ဒေသတွင်းတွင်သာမက KNU တိုက်စစ်မှူးများ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများလည်းမပါ၀င်ခဲ့ပါ။ သို့‌သော် ဤအတ္ထုပ္ပတ္တိစီမံကိန်းကို ပြုလုပ်သောအခါ ကျွနှ်ပ်၏အဆက်အသွယ်များကို ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခဲ့ရသည်။ ကျွနှ်ပ်၏အဆက်အသွယ်များက အကူအညီပေးသည့်အပြင် သူ၏ဉီး‌လေးအကြောင်းကို ပြောပြရန် အလွန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ သူ့ ဦးလေးဖြစ်သူမှ ၎င်း‌၏အကြောင်းအရာများကို မျှဝေလိုစိတ်ရှိမရှိကို သိရှိရန် သူ့ ဦးလေးကိုမော်လမြိုင်သို့ခေါ်‌ဆောင်လာခဲ့သည်။ လွယ်တော့မလွယ်ကူခဲ့ပေ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စောဖား‌ဒေးသည် ထိုမြို့သို့ မရောက်ရှိ‌‌တော့သည်မှာ ၄၃နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။ စောဖား‌ဒေး၏ တူဖြစ်သူမှ သူ၏ကွယ်လွန်သွားဖြစ်သောမိခင်၏ နှစ်ပါတ်လည်ကိုအကြောင်းပြချက်‌ပေးကာ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စောဖား‌ဒေး မော်လမြိုင်မြို့သို့ရောက်ရှိ‌သောအခါ မည်သည့်အခမ်းအနားမှ မတွေ့ရသည့်အတွက် မြို့မှချက်ခြင်းပြန်လည်ထွက်ခွာလိုခဲ့သည်။ ၂ရက်ကြာပြီး‌နောက် သူ၏ချစ်လှစွာ‌သော ရွာလေးဆီသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ ထိုဖိတ်ကြားချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ အဓိကသတင်းပေးသူအတွက် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့် အင်တာဗျူးပြုလုပ်ရန် သူ၏ဦးလေး မော်လမြိုင်သို့လာမည်လား။ မလာမှာ ကျိန်း‌သေပါတယ်။
ထိုအချိန်က ကျွန်ုပ်စောဖား‌ဒေးကိုဆုံတွေ့နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိ‌သော်လည်း ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်အတွက်ရော စီမံကိန်းအတွက်ပါ ကောင်းသောအရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သူ၏ရွာတွင် သူ၏နေ့စဥ်ဘ၀နှင့် နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါ အင်တာဗျူးခွင့်ရခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ထီးဖာထော ရွာသို့ သွားရောက်ရသည့်ခရီးမှာ အားစိုက်ရပြီး ခက်ခဲပါသည်။ ကျွနှ်ပ်၏အဆက်အသွယ်မှ ကျွနှ်ပ်ကို KNU က ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်သော ဒေသသို့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များကို ရှောင်ရှားရန် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အနန်းကွင်းကျေးရွာနှင့်၎င်း၏(တရား၀င်မဟုတ်သော) နယ်နိမိတ်အပြင် တပ်မတော်ထိန်းချုပ်နယ်မြေနှင့် KNUထိန်းချုပ်နယ်မြေတို့အကြား ကျော်လွှားခဲ့ရသည်။ လမ်းကြောင်းသည် မိုးရာသီမှစ၍ ယခုတိုင်ရွှံ့ထူနေဆဲဖြစ်သော်လည်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ထီးဖားထောကျေးရွာသို့ ကျွန်ုပ်တို့သွားရမည့်“လမ်း” နှင့်ယှဉ်လျှင်ကောင်းသောအခြေအနေတွင်ရှိသည်။ စောဖာဖာဒေး၏ဘဝတွင် အ‌ရေးပါသောနေရာများဖြစ်သည့် ၀င်းခန နှင့် သံဘယာ ကျေးရွာများသို့ ကျွန်ုပ်အားလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်၏လမ်းညွှန်နှင့် သတင်းပေးသူအား ကျေးဇူးတင်မိသည်။ ထို့အပြင် KNU လက်အောက်ခံခေါင်းဆောင်ဟောင်းနှင့် စောဖား‌ဒေး၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူဒေါ်လဲ၏ မိသားစုနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သည်။
စောဖား‌ဒေးမှ ၎င်း‌၏ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းကြောင်းကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် နှုတ်ဖြင့်သာ သမိုင်းအင်တာဗျူးလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နှုတ်ဖြင့်ပြောသောသမိုင်းကြောင်းသည် မေးမြန်းခံရသူသည် မိမိကိုယ်ကိုနှင့် ၎င်း‌တို့၏သမိုင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း‌ဖော်ထုပ်ပြောဆိုနိုင်သောကြောင့် သမိုင်းလေ့လာမှုဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ (Perks and Thomson 1998: 360) နှင့်အတိတ်အကြောင်းတို့ကို ပိုမိုပြောပြနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်ဥာဏ်များသည် တည်ငြိမ်သည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရန်လိုသည်။ နှုတ်သမိုင်းလေ့လာသူသည် ဘက်လိုက်မှုမရှိသည့် သမိုင်းတင်ဆက်မှု ဖြစ်ရန်သတိထားရပါမည်။ ပစ္စုပ္ပန်အယူအဆများရှိ စွဲမြဲနေသော ခံစားချက်များ နှင့် အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူ၏အခြေအနေတို့ကိုလည်း သတိထားရပါမည်။ စောဖား‌ဒေး နှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံစဉ် သူ၏‌နောက်ကြောင်းအနည်းငယ်ကို သူ၏တူဖြစ်သူထံမှ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဥ်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းဖြင့် စတင်ပြီး သူ၏ဘ၀အကြောင်းမေးသောမေးခွန်းများကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်စေရန် အချိန်ယူရပါသည်။ ကျွန်တော့်လမ်းညွှန်၏ ပြောပြချက်အရ စောဖာဒေးနေထိုင်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ဤကဲ့သို့ မေးမြန်းမှုမျိုးသည် ဖြစ်‌တောင့်ဖြစ်ခဲကြောင်း သိရသည်။ တူဖြစ်သူကိုယ်တိုင်လည်း ကျွနှ်ပ်၏အင်တာဗျူးမတိုင်ခင် ဦးလေးဖြစ်သူ၏ဘ၀သမိုင်းကို စေ့စေ့စပ်စပ်မသိခဲ့ပါ။ တူဖြစ်သူသည် ကျွနှ်ပ်၏ဘာသာပြန်အဖြစ် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ အင်တာဗျူးကို ကရင်ဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုခဲ့သည်။ ပါးစပ်သမိုင်းပညာရှင် (Morrissey 1998; Slim and Thompson 1998) ၏အကြံပြုချက်အရ စောဖား‌ဒေးအားအင်တာဗျူးရာတွင် အချိန်အလုံအလောက်ပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ ကရင်လူမျိုးတို့၏ သမိုင်းတွင် ၎င်း‌၏အမြင်ကို ပိုမိုသိရှိ‌ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ၎င်း‌၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များကို လိုချင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုအကြောင်းအရာများကို နှစ်အလိုက်စီ၍ ‌ရေးသားခဲ့ပါသည်။ စောဖား‌ဒေး၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသမိုင်းကိုမတင်ပြမီ ၎င်း‌၏နောက်ခံဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံရှိကရင်လူမျိုးများ၏အကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့၏သမိုင်းကို တင်ပြပါမည်။
ကရင်နှင့်မြန်မာစစ်တပ်အကြား ဖြစ်သော ပြည်တွင်းစစ်ကို အကြာရှည်ဆုံးစစ်ပွဲသို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့အကြာရှည်ဆုံးပြည်တွင်းစစ်အဖြစ် မကြာခဏဖော်ပြခံရလေ့ရှိသည် (Gravers 2014: 173) ဤပဋိပက္ခ၏အကြောင်းရင်းခံသည် ကိုလိုနီခေတ်မှစတင်ခဲ့သည်။ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) နှင့်မြန်မာစစ်တပ်အကြားပြည်တွင်းစစ်သည် ဗြိတိသျှလက်အောက်မှလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် တစ်နှစ်အကြာ ၁၉၄၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်စကားလုံးတွင် ကရင်ပြည်နယ် ဟူ၍ တစ်ခါမျှမရှိခဲ့သော်လည်း ကိုလိုနီခေတ်ကာလအတွင်း ကရင်လူမျိုးတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာဆိုင်ရာ သဘောထားသည် ပြင်းထန်စွာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့အတွက် စောဖိုးဒေး၏ဘဝကိုခိုင်မာစွာပုံသွင်းထားသည့်ဟုဆိုနိုင်သော ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းပြချက် ၂ခုကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ထိုအရာတို့မှာ မြန်မာနှင့်ကရင်အကြားရှိ နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ကရင်တို့အကြားရှိဘာသာရေးကွဲပြားမှုတို့ဖြစ်ကြသည်။ အမေရိကန်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်သာသနာပြုများသည် ၎င်း‌တို့၏အောင်မြင်သောသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို ၁၈၁၃ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပပထမဆုံးနှင့် ယနေ့တိုင်အောင်အလွန်ကျော်ကြားသော သာသနာပြု Adoniram Judsonလာရောက်ပြီးနောက်တွင် ပထမအင်္ဂလိပ် – မြန်မာစစ်ပွဲ (၁၈၂၄-၁၈၂၆)အပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်စတင်ခဲ့သည်။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်များအဖြစ်မှပြောင်းလဲရန် သူ၏ကြိုးပမ်းမှုများသည် ဘာသာပြောင်းဝင်လာသူအရေအတွက်အရ ထိရောက်မှုမရှိပါ။ နတ်ကိုးကွယ်သောကရင်များကြား ခရစ်ယာန်သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို ကျမ်းစာများအားဘာသာပြန်၍ စာဖြင့်ရေးသားပေးခြင်းဖြင့် လုပ်‌‌ဆောင်ခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုဖြစ်ရခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကို သာသနာပြုသူများက သိရှိ‌စေခဲ့သည်။ ၁၈၈၁ခုနှစ်တွင် ခရစ်ယာန်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNA) ကိုခရစ်ယာန်သာသနာပြုများ၏အကူအညီဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၈၈၅ခုနှစ်တွင် တတိယအင်္ဂလိပ် – မြန်မာစစ်ပွဲအပြီး ဗမာတော်လှန်ရေးတွင်မြန်မာဘုရင်စနစ်အဆုံးသတ်သွားခြင်းနှင့် ဗမာပြည်တစ်ခုလုံးကိုဗြိတိသျှအင်ပါယာသို့ပေါင်းစည်းစေခြင်းအားဖြင့် ခရစ်ယာန်ကရင်များသည် ဗြိတိသျှတပ်များအားထောက်ပံ့ရန် ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာသူပုန်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် အားတက်သရောကူညီပေးနေသည်ဟုသတင်းများရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၂၉ခုနှစ်တွင် ကရင်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ရေးသားခဲ့သည့် စာအုပ်တစ်အုပ်တွင် ဗမာနှင့်ကရင်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုများကြောင့် အတူတကွအုပ်ချုပ်၍မရနိုင်ဟု ဖော်ပြထားသည် (San C. Po 2001) စာအုပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည့် အတွေးအခေါ်များသည် ဗြိတိသျှအပေါ်သစ္စာစောင့်သိမှုအတွက် ဆုတစ်ခုအဖြစ် ကရင်တို့အတွက် သီးခြားပြည်နယ်တစ်ခုတောင်းဆိုမှု၏အစအဖြစ် ထင်မှတ်နိုင်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကရင်စစ်သည်များသည် ဗြိတိသျှစစ်တပ်တွင် အမှုထမ်းခဲ့ပြီး အောင်ဆန်း၏ ဦးဆောင်မှုအောက်ရှိ ဂျပန်တို့နှင့်မဟာမိတ်များဖြစ်သော ဗမာလွတ်လပ်သောတပ်မတော် (BIA) ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ခုနှစ်တွင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ BIA နှင့်ကရင်လူမျိုးများအကြားအကြမ်းဖက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည် ခရစ်ယာန်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်သော ကရင်လူမျိုးတို့၏ လူမှုရေးမှတ်ဉာဏ်၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ (Gravers 2007; 2014: 180-182)
၁၉၄၇ခုနှစ်တွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ကို KNA မှဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် ချမ်းသာသောကရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၀င်များပါဝင်သည်။ KNU သည် ကရင်လူမျိုးအများစုနေထိုင်သည့် ဒေသအားလုံးပါဝင်သော ပြည်နယ်တစ်ခုကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ KNLA ၏ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်အများစုဖြစ်သော်လည်း အောက်ခြေတွင် အများစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာကရင်များ ဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် တင်းမာမှုများကိုဖြစ်စေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်လူမျိုးများက ၎င်းတို့ကိုခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များက အမြတ်ထုတ်သည်ဟု ခံစားခဲ့ရတယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ်ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်မတော် (DKBA) ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး ဦးသုဇန၏လက်အောက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်ကတော့ KNU ၏ဌာနချုပ်နှင့်ထိုင်းနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသောအခြားအတိုက်အခံအုပ်စုများသည် မြန်မာနိုင်ငံအား ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သောစစ်အစိုးရလက်‌အောက်သို့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကရင်လူမျိုးများသည် တစ်ခုတည်းအဖြစ်စည်းလုံးညီညွတ်သည်ဟု ပြောဖို့ရာခက်ခဲပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကရင်လူမျိုးအုပ်စုအမျိုးမျိုးကို အကျိုးစီးပွားနှင့် အဖွဲ့အစည်းစသည့်အရာများဖြင့် ခွဲခြားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ ဒုက္ခသည်များ၊ အခြားနိုင်ငံတွင်အခြေချသွားသောကရင်လူမျိုးများ၊ အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသည့်ကရင်လူမျိုးများနှင့်“ အခြား” ကရင်လူမျိုးအမြောက်အမြား Thawnghmung(၂၀၁၃) မှခေါ်တွင်သည့်အတိုင်း။ ၎င်းတို့သည် မကြာခဏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲ၀င်နေကြသည့်ကရင်များနှင့် မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲများကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရသူများဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ပြန်ပြောသည့်ပုံပြင် အများစုတွင် စောဖား‌ဒေးအကြောင်းမပါ၀င်ပါ။ သူသည် နိုင်ငံ၏အရှေ့ဘက် ထိုင်းနယ်စပ်အနီးတွင် နေထိုင်သောကရင်လူမျိုးများထဲမှတစ်‌‌ယောက်ဖြစ်ပြီး ကရင်လူမျိုးများနှင့်ဗမာလူမျိုးများအကြားရှိ ပဋိပက္ခများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ-ခရစ်ယာန်ဘာသာ စသည့် ခွဲခြားမှုများအတွင်း ဆွဲခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
စောဖား‌ဒေး သည် မွန်ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သော မော်လမြိုင်မြို့တွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သူ၏မိဘများမှာ စကောကရင်လူမျိုးများဖြစ်သော ဉီးရွှေထွန်းနှင့် ဒေါ်ရွှေတို့ဖြစ်သည်။ သူ၏မိသားစုသည် ရံဖန်ရံခါ မော်လမြိုင်ကမ်းလွန်ဖြစ်သော ဘီလူးကျွန်းတွင်လည်း နေထိုင်ကြသည်။ ဘီလူးကျွန်းသည် ၎င်း‌၏မိခင်ဒေါ်ရွှေ၏ မွေးရပ်မြေဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း‌၏ဖခင် ဉီးရွှေထွန်း၏ ဇာတိမှာ မော်လမြိုင်မြို့၏တောင်ဖက် ကရင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော ကြာအင်းဆိပ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ဉီးရွှေထွန်းနှင့် ဒေါ်ရွှေတို့သည် ၎င်း‌တို့၏အိမ်နားရှိ မတူညီသည့် ‌ကျောင်းတွင်စာသင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကျောင်းများသည် ဦးရွှေထွန်းနှင့်ဒေါ်ရွှေတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည့် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ ထိုကျောင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် နောက်ပိုင်းတွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကိုပါစီစဥ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအရာများအားလုံးသည် ၁၉၄၀ခုနှစ်ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ဂျပန်များက မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ချိန်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ စောဖား‌ဒေးတွင် ၁၉၅၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် မွေးချင်းအငယ် ၂ယောက်ရှိပါသည်။ သူ၏ ကျောင်းနေစဥ်ကာလများကို မပျော်မွေ့သည့် အချိန်များအဖြစ် အမှတ်ရနေခဲ့ပါသည်။ သူသည် ၅တန်းအထိကျောင်း‌‌နေခဲ့ရပြီး ၆တန်းစာမေးပွဲအောင်ရန် နှစ်အနည်းငယ်ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ သူ၏ မိသားစုဖြစ်စေ ‌ကျောင်းဖြစ်စေ သူ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုမ‌ပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ သူအသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်အိမ်မှထွက်သွားပြီး တောထဲ၌ကျင်လည်နေသောကရင်လူငယ်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်သူသည် KNU အဖွဲ့ဝင်များ၊ ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒေါ်လီသည်လည်း၎င်းတို့ထဲမှတစ်ဦးဖြစ်သည်။
စောဖား‌ဒေး၏မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင် သူကျောက်မျက်ကုန်သည်နှင့်စတင်သိကျွမ်းသည့်အချိန်၌အသက် ၂၆ နှစ်ခန့်သာရှိသေးသည်။ ထိုကုန်သည်သည် ကရင်လူမျိုးတစ်‌‌ယောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏မြောက်ဖက်ပိုင်းရှိကျောက်မျက်ရတနာများပေါများသည့် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် မော်လမြိုင်မြို့သို့ ကုန်သွယ်ခရီးသွားလာလေ့ရှိသူတစ်‌‌‌ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုကုန်သည်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးမကြာမီ စောဖာဒေးသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င်ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်မှုကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်မော်လမြိုင်ရှိကုန်သည်ထံမှ ကျောက်မျက်ရတနာများကို ယူ၍ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးသို့လှေဖြင့်သွားခဲ့သည်။ ကရင်ပြည်၏ထူထပ်သော တောအုပ်ကို ဖြတ်ရန် အချိန် ၂ရက်ကြာအောင်လမ်းလျောက်ရန် ရဲ့ရင့်သန်မာသော ခြေလှမ်းများလိုအပ်ပါသည်။ ထိုအချိန်များတွင် စောဖရဲဒေးသည် ၎င်း‌၏ဘိုးဘေးများ၏ကြမ်းတမ်းသောခရီးစဉ်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခွင့်ရခဲ့သည့်အချိန်များဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့သို့ ‌ရောက်ရှိရန် နောက်ထပ်သုံးနာရီကြာ‌‌အောင် လှေစီး၍ သွားရသည်။ ကရင်လူမျိုးများသည် မြန်မာပြည်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံနှစ်ခုလုံးတွင် နေထိုင်သောကြောင့် စောဖား‌ဒေးလိုကုန်သည်များသည် နယ်စပ်ကိုတရားမ၀င်အလွယ်တကူဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်သူ၏ ခရီးစဉ်သည်မဲဆောက်တွင်အဆုံးသတ်‌သော်လည်း တစ်ခေါက်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲ ဘန်ကောက်မြို့သို့ပင်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မဲဆောက်သို့ ရောက်သောအခါ သူသည်သယ်ဆောင်လာသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာများကို ထိုင်းဘက်ခြမ်းရှိအခြားသယ်ဆောင်သူထံသို့လွှဲပြောင်းပေးရသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် စောဖား‌ဒေးသည် ထိုသယ်ဆောင်သူထံမှ ပိုက်ဆံလက်ခံရရှိပြီး မော်လမြိုင်မြို့ရှိ ကုန်သည်များထံပြန်ပို့ခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ ပုံမှန်အလုပ်ပုံမှန်လည်ပါတ်ခဲ့ရပြီး အလုပ်လည်း‌ကောင်းခဲ့သည်။ သူသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ၃လမှ ၅လခြားတစ်ခါ ‌ကျောက်မျက်ရတနာများ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးရသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာများသည်အလွန်အဖိုးတန်သောကြောင့် ထိုအလုပ်သည်အတော်လေးအကျိုးအမြတ်များသောအလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူ၏လုပ်ငန်းဒုတိယမြောက်နှစ်တွင် ထိုင်းဖက်မှသယ်ယူသူမှ စောဖား‌ဒေး လိမ်လည်ခဲ့သည်။ စောဖား‌ဒေးသည်မော်လမြိုင်မြို့မှ အလွန်အဖိုးထိုက်တန်‌သော ပတ္တမြားတစ်လုံးကိုသယ်ယူလာခဲ့သည်။ ထိုင်းဖက်မှသယ်ယူသူထံ ပတ္တမြားကိုလက်လွှဲပြီးချိန်တွင် ထိုသူမှာ ပိုက်ဆံမပေးဘဲ ‌ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်မြို့ရှိကရင်ကုန်သည်များထံပြန်ပေးရမည့် ပိုက်ဆံမရှိတော့‌ သောကြောင့် သူသည်ကြောက်လန့်ကာ အိမ်သို့ မပြန်ရဲတော့ပေ။ သူသည် ကရင်ပြည်နယ်၏ကုန်းတွင်းပိုင်း ကျေးရွာများတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က နောက် ၄၃ နှစ်ကြာပြီးမှ မော်လမြိုင်သို့ပြန်လာရမည်ဖြစ်ကြောင်း သူ့အမေနှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံခြင်းမရှိ‌တော့ကြောင်းနှင့် သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်မော်လမြိုင်ရှိမိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်ဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်များရှိကြောင်းကို သူမသိရှိခဲ့ပဲ ‌နှစ်‌ပေါင်းများစွာကြာမှသာသိရှိခဲ့ရသည်။ သူ့အစ်ကိုသည်သာ အခါအား‌‌လျော်စွာ သူနေထိုင်သည့်နေရာသို့ လမ်းကြုံ၀င်ရောက်လည်ပါတ်လေ့ရှိ‌သော်လည်း သူ့မိသားစုခံစားခဲ့ရသည့် အကျိုးဆက်များကိုမပြောပြဖြစ်ခဲ့ပါ။
စောဖား‌ဒေးသည် ၀င်းခနကျေးရွာတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ငယ်စဥ်ကသိကျွမ်းခဲ့သော ဒေါ်လီ၏အဖွဲ့သို့၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒေါ်လီသည် KNU ဒေသခံခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သူသည် KNU ဒေသလေးခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ၀င်းရွာမြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ၆. ထိုဒေသသည် တပ်မတော်ထိန်းချုပ်ဒေသမဟုတ်ဘဲ KNU ၏ထိန်းချုပ်ဒေသ (ယနေ့တိုင်) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ဒေသကို အဖွဲ့ငယ်လေးများ ၂၀မှ ၃၀အထိ ကင်းလှည့်ခဲ့ကြပြီး စောဖား‌ဒေးသည်ထိုအထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကျောင်းဆရာများရှားပါးလာသည့်နှင့်အမျှ သူသည်ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ကျောင်းဆရာအဖြစ် ထမ်း‌‌ဆောင်ခဲ့သည်။ သူဒေါ်လီ၏အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးအနေဖြင့် နေခဲ့ရသည့်အချိန်များသည် ကောင်းမွန်သည့်အမှတ်တရများဖြစ်ခဲ့သည်။ တောအုပ်ထဲတွင် လှည့်လည်သွားလာရသည့် လွပ်လပ်ခြင်းကို သူအလွန်နှစ်သက်ပါသည်။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရလျှင် ထိုနေရာတွင်စွန့်စားခန်းများစွာက ကြိုဆိုနေ‌သော်လည်း သူ့အနေဖြင့် အမဲလိုက်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည်။ ထိုဒေသကိုကင်းလှည့်နေစဉ် အစားအစာများလိုအပ်လျှင် ခေါင်းဆောင်သည်စောဖားဒေးကိုအမြဲတာ၀န်ပေးအပ်သည် အဘယ်‌‌‌‌‌‌‌ကြောင့်ဆိုသော်သူသည်အကောင်းဆုံးလက်ဖြောင့်သမားဖြစ်ပြီး ပစ်မှတ်များကိုအမြဲထိမှန်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
စောဖား‌ဒေး‌နေထိုင်သည့်ကျေးရွာ ပါတ်၀န်းကျင် (G. Winterberger)
စီ၀ဆိုသော ဒေသခံကရင်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့် ကင်းလှည့်တာ၀န်ထမ်း‌ဆောင်နေချိန်တွင် ဆုံတွေ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုမိန်းကလေးသည် ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သော သံဘရာကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးနှင့် ၃နှစ်ကျော်ကြာ ချစ်ကြိုက်ပြီးနောက်တွင် ဒေါ်လီထံမှ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်တောင်းခံခဲ့ကြသည်။ စောဖား‌ဒေးသည် အသက်၃၀ခန့်တွင် စီ၀နှင့် ၀င်းခနကျေးရွာတွင် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပြီး သံဘရာရွာတွင်အတူတကွနေထိုင်ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင် ‌ယောကျာ်းလေး ၂ဦးနှင့် မိန်းကလေး ၁ဦး စုစုပေါင်းသားသမီး ၃ဦး ထွန်းကားခဲ့ကြသည်။ စောဖား‌ဒေးသည် ဒေါ်လီ့အဖွဲ့တွင်ပါ၀င်၍ KNUဒေသတစ်လျှောက် ကင်းလှည့်တာ၀န်းဆက်လက်ထမ်း‌ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ KNUသည် ကရင်‌တော်လှန်ရေး၏ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သဖြင့် KNU“တိုက်စစ်မှုးများ” သည်လေ့ကျင့်ထားသောစစ်သားမဟုတ်ကြပေ – ပုံမှန်စစ်သားများသည် KNLA တွင်ပါ၀င်၍စည်းလုံးကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ KNU တိုက်စစ်မှုးများသည် တပ်မတော်နှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့် စောဖားဒေးအပါအ၀င် ဒေါ်လီနှင့်သူအဖွဲ့သည် မြန်မာစစ်တပ်နှင့်မဆုံမိရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ မြန်မာစစ်သားများသည် များသောအားဖြင့်ကရင်ရွာသားများနှင့်ပေါ်တာများကိုလူ့ဒိုင်းများအဖြစ်အသုံးပြုကာ ‌ရောက်ရှိလာလျှင် KNU တိုက်စစ်မှုးများသည်တောထဲ၌ပုန်းအောင်းနေကြရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ စောဖား‌ဒေး KNU တိုက်စစ်မှုးအဖြစ်ရှိနေချိန်တွင် တပ်မတော်မှ ၎င်းတို့ကို ၂ကြိမ်တိုင် ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲတစ်ခုတွင် KNU တိုက်စစ်မှုး၅ဦး သေဆုံးခဲ့‌‌သော်လည်း ထိုတိုက်ပွဲများအတွင်း မြန်မာဘက်တွင်ထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပါ။
သူ၏ဇနီး စီ၀သည် ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုမှ လာသူဖြစ်ခြင်းမှလွဲ၍ စောဖာဒေးသည်ပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ရေးကိုရရှိခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် သူ၏ယောက္ခမဖြစ်သူများက သူ့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာသို့ကူးပြောင်းစေလိုခဲ့ကြသည်။ သူသည်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘာသာ၀င်အဖြစ်ကြီးပြင်းလာသူဖြစ်‌သောကြောင့် အမြဲတစေငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ဤလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုရှိ ဘာသာရေးကွဲပြားမှုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ‌သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၀နှစ်ကြာပြီး‌‌နောက် စောဖား‌ဒေး နှင့် စီ၀တို့သည် ကွာရှင်းပြတ်စဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ စောဖား‌ဒေးကတော့ သူအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စေ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်စေ မည်သည့်ဘာသာကိုမှ ယ‌‌နေ့အချိန်တွင် နှစ်သက်ခြင်းမရှိ‌ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ သူကွာရှင်းပြတ်စဲပြီး‌ နောက်ပိုင်းတွင် သူ၏ကလေးများနှင့်လည်းမတွေ့ဆုံခဲ့ပါ။ သို့‌သော် သူသည်ဒေါ်လီ အပေါ်တွင်တော့ သစ္စာရှိခဲ့ပြီး ဒေသတစ်၀ိုက် ခြေဦးတည့်ရာသွားလာနေထိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်လွတ်လပ်မှုနှင့်သဘာဝတရားကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး “လွပ်လပ်ဖို့နဲ့ ကျွန်ုပ်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်ခွင့်ရဖို့” ဆိုသည့်ဝါကျသည် ယနေ့တိုင် သူ၏ဘ၀အကြောင်းဖော်ပြရန် လက်စွဲကျင့်သုံးခဲ့သော ဝါကျတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်များ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ရပ်တန့်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏ KNUတိုက်စစ်မှုးအဖြစ် တာ၀န်ယူမှုသည် သူ၏ခေါင်းဆောင်အလွန်ရင်းနှီးသောကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်လီလုပ်ကြံခံရချိန်တွင် စောဖား‌ဒေးသည် အနှစ်၂၀ကျော်တာ၀န်ယူခဲ့သည့် KNUတိုက်စစ်မှုးအဖြစ်မှ ရပ်တန့်ရန်နှင့် အဖွဲ့မှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူသည် အသက် ၅၀ အရွယ်တွင် သူအမြဲနှစ်သက်ခဲ့ရသော ထီးဖားထောကျေးရွာတွင်အငြိမ်းစားယူပြီးနေထိုင်ခဲ့သည်။ လှပသောသဘာ၀ပါတ်၀န်းကျင်နှင့် လွပ်လပ်မှု ကိုထိုနေရာတွင် ခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည်ကင်းလှည့်တာ၀န်ထမ်းဆောင်စဉ်က ထိုနေရာတွင် သူငယ်ချင်းများစွာရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင်သူ၏ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိသော်လည်း သူ၏သူငယ်ချင်းများက အိမ်တွင်လာနေရန် အမြဲကြိုဆိုသည်။ စောဖာဒေးသည် တိရိစ္ဆာန်များကိုအမဲလိုက်ခြင်း အထူးသဖြင့် ငှက်များအားလေသနတ်ဖြင့်ပစ်ဖမ်း၍ ရွာထဲတွင်ရောင်းချခြင်းဖြင့် အသက်မွေးခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်သည် ထီးဖားထောကျေးရွာသို့ မကြာခဏလာရောက်ခဲ့ပြီး ကရင်စစ်သားများ၊ စစ်တပ်အသုံးအဆောင်များ သို့မဟုတ် အတင်းအဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေရန်အတွက် ပေါတာအဖြစ် အား‌ကောင်းမောင်းသန်ကရင်အမျိုးသားများအား လာရောက်ရှာ‌ဖွေလေ့ရှိကြသည်။ ထိုအချိန်များတွင် အခြားရွာသူရွာသားများနည်းတူ စောဖား‌ဒေးသည်လည်းတောထဲ၌အမြဲပုန်းနေခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူလည်း အခြား‌‌သူများနည်းတူထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Hwe Malei ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ၂နှစ်ခန့်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်လုံခြုံစိတ်ချရပြီး သူ၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ကရင်အသိအကျွမ်းများစွာလည်းထို‌နေရာတွင်နေထိုင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ထိုနေရာတွင် ထိုင်းအာဏာပိုင်များမှ စည်းကမ်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်ထား‌သောကြောင့် သူအနေဖြင့် လုပ်စရာမရှိ‌ သောကြောင့် မပျော်ရွှင်နိုင်ခဲ့ပါ။ သူချစ်မြတ်နိုးရသည့်ကျေးရွာ၏လွတ်လပ်မှုနှင့်ရှုခင်းများကိုသူ လွမ်းဆွတ်ခဲ့ရသည်။ အန္တရာယ်ရှိသည့်ကြားမှ အိမ်သို့ သုံးရက်ကြာလမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့သည်။ ထီးဖာထောရွာသို့ ပြန်ရောက်ပြီး ‌ပျော်ရွင်သည့်ဘ၀ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် လုံး၀အန္တရာယ်ကင်းသည့် ဘ၀မျိုးတော့မဟုတ်ပါ။ ရွာသားများသည် တစ်ခါတစ်ရံမြန်မာစစ်တပ်များထံမှ ပုန်းအောင်းနေရဆဲဖြစ်သော်လည်း ၎င်းမှာလွတ်လပ်သည့် ဘ၀တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့အချိန်တွင် မြန်မာစစ်သားများလည်း လာ‌‌ရောက်ခြင်းမရှိကြ‌တော့ပါ။
စောဖား‌ဒေး၏အငယ်ဆုံးသားမှာ‌ ‌ကျေးရွာအနီးတွင်ပင်နေထိုင်သောကြောင့် မကြာခဏတွေ့ခွင့်ရသည်။ သူ၏ ညီဖြစ်သူမှလည်း အခွင့်အခါသင့်သလို လာ‌ရောက်လည်ပါတ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က စောဖား‌ဒေးသည် သူ၏မိခင်ဖြစ်သူမော်လမြိုင်မြို့တွင် ဆုံးပါသွားပြီဖြစ် ကြောင်းကြားသိခဲ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အလွန်က သူထိုင်းဖက်မှသယ်ယူသူထံမှ အလိမ်ခံရစဉ် မော်လမြိုင်သို့မပြန်ဖြစ်ခဲ့‌သောကြောင့် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဆိုသောကိစ္စများကိုလည်းသူသိရှိခွင့်ရခဲ့သည်။ စောဖား‌ဒေး ထံမှ ငွေကြေးရစရာရှိ‌ သောကရင်ကုန်သည်သည် သူပြန်ရောက်မလာသောအခါ သူ၏မိသားစုထံသို့ ဆက်သွယ်လာခဲ့သည်။ စောဖား‌ဒေး၏မိခင်မှ မြေအချို့ကို ရောင်းချပြီး ထိုငွေများကို ပေးချေခဲ့ရသည်။ အကယ်၍ထိုအကြောင်းကို စောဖား‌ဒေးသိရှိခဲ့လျှင် မော်လမြိုင်မြို့သို့ ပြန်သွားပြီး သူ၏အကြွေးများအတွက် ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ သို့‌သော် နှစ်‌ပေါင်းများစွာကြာပြီး အသက် ၆၀နီးပါးရှိသည့် ပိုက်ဆံတပြားမှမရှိသည့် ဘ၀ဖြင့် မော်လမြိုင်မြို့သို့ ပြန်သွားစရာအကြောင်းပြချက် သူ့မှာမရှိတော့‌ပေ။ သူ၏တူဖြစ်သူမှ အလွန်တိုက်တွန်း‌တောင်းဆိုမှုကြောင့်သာ သူတစ်ခေါက်ပြန်သွားဖြစ်သည်။ စောဖား‌ဒေးသည် သူ၏ မျက်စိတွင်ပြဿနာမဖြစ်ခင်အချိန်အထိ မုဆိုးဘ၀ဖြင့်အသက်မွေးခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် သူ့အသက် ၇၀ရှိပြီဖြစ်သည်။ သူအလွန်ချစ်‌သောသေနတ်ကို ရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် သူသည် ရွာတွင် ထိုင်းထီများ ရောင်းချခြင်းဖြင့်အသက်မွေးပါသည်။ သူ၏အနာဂါတ်အတွက်လည်း သူစိုးရိမ်မိပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် သူ့ကိုယ်သူ စောင့်ရှောက်နိုင်သော်လည်း မည်မျှကြာသည်အထိ ထိုသို့လုပ်နိုင်မည်ကို မသေချာပါ။ သူဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ဘယ်သူက သူ့ကိုစောင့်ရှောက်မည်ကို သူမသိပါ။
စောဖားဒေးကို ၎င်း‌၏ဇာတိမြေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဉီးအဖြစ် ဖော်ပြ၍မရနိုင်ပါ။ သူသည် KNUသို့ အမှတ်မထင်၀င်‌ရောက်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ သူသည်သူ့ဘဝရှိအခက်အခဲများနှင့်အန္တရာယ်များအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စောဖား‌ဒေးသည် သူ၏ဘ၀တွင်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချနိုင်ခဲ့သည်။ သူငယ်ရွယ်စဥ်အခါတွင် သူငယ်ချင်းများနှင့်တောအုပ်ထဲသို့ ခြေဆန့်ရသည်ကို နှစ်သက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် KNUစတင်ဖွဲ့စည်းကာစအချိန်ဖြစ်သည်။ ဆယ်နှစ်မှ ဆယ့်ငါးနှစ်ခန့်ပင်ကြာမြင့်‌သေးသည်။ KNUသည် ကြီးထွားလာပြီး အင်အားကြီးမားပြီးသြဇာညောင်းသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ လူငယ်များ၏ စိတ်၀င်စားမှုများကိုလည်း ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့‌သော် စောဖား‌ဒေးအတွက်မူ ထိုအရာသည် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါ။ သူ KNUသို့၀င်ရောက်ခဲ့ခြင်းသည် သူငယ်ရွယ်စဥ်ကတည်းက ခင်မင်ရင်းနှီးသည့် သူ၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဒေါ်လီကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်လီသည် KNUဒေသအမှတ် ၆၏ ‌ဒေသခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စောဖား‌ဒေး သည် ၎င်း‌၏နက်ရှိုင်း‌သော သူငယ်ချင်းသံယောဇဥ်နှင့် ၎င်း‌၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို ကူညီရန်အတွက် ဒေါ်လီ၏အဖွဲ့သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း စောဖား‌ဒေးသည် ထိုင်းဖက်မှသယ်ယူသူထံမှ အလိမ်ခံရခြင်းကြောင့် ပိုက်ဆံမရှိဘဲ မွေးရပ်မြေသို့ ပြန်သွားရန် ကြောက်လန့်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စောဖား‌ဒေးသည် ‌ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမည်မှန်းမသိသော အခြေအနေတွင် ရှိနေခဲ့ပါသည်။ ၎င်း‌၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အကြောင်းပြချက်များစွာအပေါ်အခြေခံထားပါသည်။ ဒေါ်လီအသက်ခံရပြီး မကြာခင် စောဖား‌ဒေး KNUမှ ထွက်ခွာခဲ့ခြင်းသည် သူအနေဖြင့် ကရင်တိုက်စစ်မှုးတစ်‌ယောက်ဖြစ်လာရသည့်အဓိကအကြောင်းသည် သူငယ်ချင်းသံယောဇဥ်ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟူသော ယူဆချက်ကို ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့သည်။ စောဖား‌ဒေး ကိုယ်တိုင်လည်း သူအဖွဲ့၀င်ဖြစ်လာရခြင်း၏ နောက်ခံအကြောင်းပြချက်ကို မစဥ်းစားဖြစ်ခဲ့ပါ။ သူအနေဖြင့် ဒေါ်လီ၏အဖွဲ့သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် သူ၏ဘ၀အခြေအနေကို ကျေနပ်ခဲ့သည်ဟုသာ ထောက်ပြခဲ့ပါသည်။
လွတ်လပ်မှု၊ သူ့ဇာတိမြေကိုချစ်ခြင်းနှင့် လူမှုရေးသို့မဟုတ်ရုပ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာအကန့်အသတ်များမှ လွတ်ငြိမ်းခြင်းတို့သည် စောဖာဖာ၏ဘဝတစ်လျှောက်ကိုထင်ဟပ်နေသော အဓိကစကားလုံးများဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သူ၏လူမှုဝန်းကျင်ရှိ အားပြင်းသောလွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုကို မရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပေ။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် DKBA ဖွဲ့စည်းရန် ဦးဆောင်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်နှင့်ခရစ်ယာန်ကရင်တို့၏ တင်းမာမှုများသည် စောဖီးဒေကိုလည်းထိခိုက်‌စေခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်ယောက္ခမများနှင့် သူ၏အကြားရှိ မမြင်သာသည့်တင်းမာမှုသည် မြေပြင်ပေါ်သို့ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူ၏ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်ယောက္ခမများသည် နောက်ဆုံးတွင်သူ့အား ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်အဖြစ်ကူးပြောင်းရန် သို့မဟုတ် သူ၏ဇနီးအား ကွာရှင်းရန် ‌တောင်းဆိုလာကြသည်။ သူကွာရှင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဘာသာ‌ရေးကြောင့်ထိုသို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သလား။ မဟုတ်ပါဟု စောဖား‌ဒေးမှပြောခဲ့သည်။ သူဘာသာ‌ရေးကို နှစ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ မိရိုးဖလာကြောင့် သို့မဟုတ် သူ့ရဲ့အကျင့်ဗီဇကြောင့်ထိုသို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သလား။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ‌သေချာစွာမသိခဲ့ပါ။ သို့သော်ဤဆုံးဖြတ်ချက်တွင် လွတ်လပ်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်သည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါ၀င်ခဲ့သည်။
ပြီးတော့ ဤဘ၀သည် ယနေ့တိုင် စောဖား‌ဒေး နေထိုင်လာခဲ့သည့်ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ မျက်စိများပိုမိုဆိုးရွားလာသောအခါ သူအခြားအလုပ်အကိုင်တစ်ခု ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရန် သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူဟာကံကြမ္မာကိုစိန်မခေါ်ခဲ့သော်လည်း သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့တဲ့သေနတ်ကိုရောင်းပြီး အသက် ၇၀ အရွယ်မှာဘဝသစ်တစ်ခုစခဲ့ရပါတယ်။
1 ‘Karen’ ၏မြန်မာအသံထွက်နာမည်မှာ ‘ကရင်’ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာသားသည် ကရင်လူမျိုးများမှ ၎င်းတို့အကြောင်း နိုင်ငံခြားသားများကို ပြောဆိုသောအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုအသုံးပြုသည်။
2 အတိအကျကိန်းဂဏန်းများမရှိသော်လည်းခရစ်ယာန်ကရင်ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၅% ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည် (Gravers 2014: 175)
* စောဖားဒေးထံသို့ သွားရန်ခရီးစဉ်နှင့် ဤထုတ်ဝေမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို Zurich တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံနှင့်လူသားသုတေသနသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းမှငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ (No. STWF-17-021) ။
Autor Rodion EbbighausenVeröffentlicht am 20. Juni 2020 25. Juni 2020 Kategorien UncategorizedSchreibe einen Kommentar zu စောဖားဒေး (မွေးသက္ကရာဇ် ၁၉၄၅ခုနှစ်) – KNU တိုက်စစ်မှုးတစ်ယောက်၏ ရုပ်ပုံ
Autor Rodion EbbighausenVeröffentlicht am 11. Juni 2020 20. Juni 2020 Kategorien UncategorizedSchreibe einen Kommentar zu စောဘဦးကြီး (1905-1950)
ဆရာစံသည် ဗမာ့လွပ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် သူရဲကောင်းများထဲမှ တစ်ဉီးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်‌‌‌‌‌‌‌ကြောင့်ဆိုသော် ၁၉၃၀ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့သည့် တောင်သူလယ်သမားအရေး‌‌တော်ပုံတွင် ဉီး‌‌‌‌‌‌‌‌‌ဆောင်ပါဝင်ခဲ့သော‌ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆရာစံ အရေး‌‌‌‌တော်ပုံ ဟုအမည်ရသော ထိုအရေး‌‌‌‌တော်ပုံကို ဆရာစံသည် ‌‌‌ခေါင်းဆောင်နေဖြင့် ၈လခန့်သာ ‌ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ထိုအရေး‌‌‌‌တော်ပုံသည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားတွင် လ‌‌ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်‌‌‌‌‌နေခဲ့ပါသည်။ ဆရာစံသည် သူပုန်ခေါင်း‌‌‌‌‌ဆောင်အဖြစ် ခဏတာမျှသာ ပါဝင်ခဲ့‌သော်လည်း ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးကာလအတွင်းရှိ အရေး‌‌‌‌တော်ပုံ၏ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ထိုအထဲတွင်ပါဝင်သော ဆရာစံ၏အခန်းကဏ္ဍတို့ကို စစ်ဆေး‌‌ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို ကြိမ်ဖန်များစွာခံခဲ့ရသည်။ “ဆရာစံအရေး‌‌တော်ပုံ” အပေါ်ရှိ များစွာ‌သော ရှုမြင်ပုံတို့သည် ယနေ့တိုင် မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေး တို့၏‌‌နောက်ကွယ်ရှိ တွန်းအားများအားနားလည်သဘော‌ပေါက်သည့် ပုံစံများအား ညွှန်ပြလျက်ရှိသည်၊
ဆရာစံကို ၁၈၇၆ခုနှစ် ‌အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက်နေ့တွင် ‌‌နောက်ဆုံး ဗမာ့မင်းဆက် တည်ထောင်သူ အလောင်းဘုရားမင်း၏ မြို့တော်ဖြစ်သော ရွှေဘိုခရိုင်အနီးရှိ ရွာတစ်ရွာတွင်‌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်နာမည်မှာ ဦးရာ‌ကျော်ဖြစ်သည်။ ဆရာစံကို မွေးဖွားပြီး ၁၀နှစ်အကြာတွင် ဗြိတိသျှတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အုပ်ချုပ်မှုအဆုံးသတ်ချိန်ရောက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ၎င်း‌မွေးဖွားရာ ‌ဒေသအနီးတွင် မိရိုးဖလာ ဘုန်း‌တော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်လာချိန်တွင် အနီးအနားရှိ အခြားရွာသို့ ‌‌ပြောင်းရွေ့ကာ ဖျာနှင့် ခြင်း‌‌တောင်းများ ယက်လုပ်ရောင်းချ၍ အသက်မွေးပါသည်။ နောင်တွင် ထိမ်းမြားလက်ထက်ခဲ့ပြီး သား‌‌ယောကျာ်းလေး ၁ယောက်နှင့် သမီးမိန်းကလေး ၁ယောက် ထွန်းကားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ‌တောင်ပိုင်းရှိ ‌‌မော်လမြိုင်မြို့အနီးရှိ မိုးမိန်းသို့ မိသားစုလိုက် ပြောင်းရွေ့ကာ လက်သမားဆရာအဖြစ် အသက်‌မွေးခဲ့ပြီး ဗေဒင်ဆရာ၊ တိုင်းရင်းဆေးဆရာအဖြစ်လည်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဆရာစံသည် အနောက်တိုင်းဆေးပညာနှင့် မိရိုးဖလာဗမာ့တိုင်းရင်း‌ဆေးပညာ ကို နှိုင်းယှဉ်ထား‌သော ကျမ်း၂အုပ် ကိုလည်းပြုစုရေးသားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစတင်၍ ၎င်းအနေဖြင့် ဆရာစံဟူသော အမည်အား ‌ခေါ်တွင်‌စေခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆေးဆရာ တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဗေဒင်၊ ဝိဇ္ဇာ နှင့် ဂါထာ ဆိုင်ရာ နယ်ပါယ်များတွင် အထူးကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
Saya San around 1927
၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံလွပ်လပ်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန် နိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ အမျိုးသား‌ရေး လှုပ်ရှားတတ်ကြွသူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား‌သော မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအသင်းချုပ် (GCBA) သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ပထမပိုင်းတွင် ဆရာစံသည် ၎င်း‌၏ ‌ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး ‌နောက်ပိုင်းတွင် ‌‌မော်လမြိုင်ခရိုင် ရုံးခွဲအတွက် တာဝန်ထမ်း‌ဆောင်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ၏ အခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ‌‌သော လယ်သမားများ၏ မကျေနပ်မှုများအား စာရင်း‌‌ကောက်ယူရန်အတွက် ဆရာစံအား ၁၉၂၄ခုနှစ်တွင် စုံစမ်းရေးကော်မတီဉက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၉ခုနှစ်တွင် ဆရာစံမှ ကိုလိုနီအစိုးရမှ မတရားဖိနှိပ်ခြင်းကို ခံနေရသည့် ရွာသားများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ခုခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကို တည်ထောင်ပြီး အမြတ်ခွန်ပေးခြင်းကို ငြင်းဆန်ရန်အဆိုပြုခဲ့သည်။ ထိုအဆိုပြုချက်ကို ၁၉၂၉ခုနှစ်တွင်ကျင်းပသော GCBA ညီလာခံတွင် ငြင်းပါယ်ခံခဲ့ရပြီး‌‌နောက် ဆရာစံသည် ဂဋုန်အသင်းဟုအမည်ရသော ၎င်း‌၏ကိုယ်ပိုင်အသင်းကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဂဋုန်ဆိုသည်မှာ ထိုအချိန်ကာလတွင် ဗြိတိသျှတို့ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကမ္ဘာမြေကြီး နှင့် ရေတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည့်နဂါးကို အောင်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသော ဒဏ္ဍာရီလာငှက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ဆရာစံသည် ၎င်း‌၏နောက်လိုက်များကို သစ္စာကျိန်ဆိုစေခြင်းနှင့် ဂဋုန်ရုပ်ပုံများအား တတ်တူးရေးထိုးစေခြင်းတို့ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ ၁၉၃၀ခုနှစ် ‌ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့တွင် ဆရာစံသည် ရန်ကုန်မြို့၏ ‌အနောက်ဘက် ၁၇၀ကီလိုမီတာခန့် အကွာရှိ သာယာဝတီခရိုင်တွင် ဌာနချုပ်ကို တည်ထောင်ပြီး “ဂဋုန်တို့၏ဘုရင်”ဟူသော အမည်ကိုခံယူ၍ အရေး‌‌‌‌တော်ပုံကို စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအရေး‌‌‌‌တော်ပုံကို လယ်သမားများ၏အခွန်များကို လျော့ပေါ့ပေးရန် ခေတ္တအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆာဂျိုးဇက် အေအောင်ကြီး မှ ငြင်းဆန်ပြီး ‌‌နောက်တစ်ရက် မင်္ဂလာရှိ‌‌သော အချိန် ည ၁၁နာရီ ၃၃မိနစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ အရေး‌‌တော်ပုံစတင်သည့် ၄၈နာရီအတွင်း အစိုးရအေးဂျင့်များဖြစ်သော ရွာလူကြီး၄‌‌‌ယောက်အသတ်ခံရပြီး အခြားအစိုးရဌာနများဖြစ်သော ရဲစခန်း၊ ဗြိတိသျှတို့၏ အမှတ်သင်္ကေတများ ဖြစ်သည့် ရထားလမ်းဂုံး‌ကျော်တံတားများ၊ ကြေးနန်းတိုင်များကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့တွင် ပဲခူးရိုးမအနီး ‌တောင်တန်းများပေါ်ရှိ ဆရာစံ၏ဌာနချုပ်ကို အစိုးရတပ်များမှ သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆရာစံသည် ဘုန်းကြီးအဖြစ် ရုပ်ဖျက်၍ ရထားဖြင့် ပြည်မြို့သို့တိမ်း‌‌ရှောင်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီလ ၁၉၃၁ခုနှစ်တွင် ရထားဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်‌‌တောင်ပိုင်းသို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် အာဏာပိုင်များ၏ မတရားနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရသည့်ရွာသားများကို ကူညီရန် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ ပါဝင်သောနောက်ထပ်ဂဋုန်စစ်တပ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အစိုးရစစ်တပ်များမှ သူပုန်တပ်များကို နှိမ်နှင်းချိန်တွင် ဆရာစံသည် ရွှေဘိုအနီးရှိ ၎င်း‌၏‌မွေးရပ်မြေသို့ ပြောင်းရွေ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း အဖမ်းခံရပြီးထိပ်တုံးခတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၃၁ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂ရက်နေ့တွင် ‌ဒေသခံတစ်ယောက်၏ သတင်းပေးပို့မှုကြောင့် ဆရာစံကို ရဲများကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ ဆရာစံကို သာယာဝတီသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာပြီး အထူးခုံရုံးဖြင့် စစ်ဆေးကာ သြဂုတ်လ ၂၈ရက်နေ့တွင် သေဒါဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အယူခံဝင်ခြင်းကို ငြင်းပါယ်ခဲ့ပြီး ဆရာစံကို ၁၉၃၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ရက်နေ့တွင် ကြိုး‌‌ပေးကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ ဆရာစံကွပ်မျက်မခံရမီ ၎င်း‌၏နာမည်နှင့် စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်စေရန် ရည်ရွယ်ကာ ၎င်း‌၏မိရိုးဖလာဆေးပညာဆိုင်ရာအကြောင်း ရေးသားထားသော စာအုပ် ၂အုပ်အား ဆက်လက်ရောင်းချခွင့်ကို သတင်းစာဆရာ ၂ယောက်အား လွှဲ‌ပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးရရှိသည့် အလုပ်များမှာ မာ့က်စ်၊ ထရော့စကိုင် နှင့် လီနင် တို့ ဖြစ်သည်။ ဆရာစံ စတင်ခဲ့သည့် အရေး‌‌‌‌တော်ပုံ သည် ၁၉၃၂ ခုနှစ်အ‌စောပိုင်းအထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ရည်ရွယ်ချက်များ နှင့် အောင်မြင်မှုများ
ဆရာစံ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ၁၉၂၉ ခုနှစ် GCBA ၏၁၆ကြိမ်မြောက် ညီလာခံတွင် ဆရာစံ အဆိုပြုခဲ့သော အဆိုပြုချက် ၂ခုမှ ထုတ်နှုတ်ထားပါသည်။
၁ – ကိုလိုနီအစိုးရမှကောက်ခံသည့် လူခွန် နှင့် သဿမေဓခွန် များကို ငြင်းပါယ်ခြင်း။
၂ – အစိုးရထံမှ သစ်တောထုတ်ကုန်များဖြစ်သော သစ်နှင့်ဝါးများအား မိသားစုအသုံးပြုခြင်း အတွက် လွပ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ‌‌တောင်းဆိုရန်နှင့် အကယ်၍ အစိုးရမှငြင်းဆန်လျှင် လက်ရှိကျင့်သုံး‌‌ နေ‌သော စည်းမျဉ်းများကို အကြမ်းမဖက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ခုခံခြင်း။
ထိုအဆိုပြုချက် ၂ခုစလုံးသည် ၁၉၂၉ခုနှစ် တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော Wall Street crash ၏ ‌နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့အကျပ်အတည်းကာလအပြီးတွင် နိုငံတစ်ကာ ဆန်စပါးစျေးကွက် ထိုးကျမှု ကြောင့် ‌ကျေးလက်နေလူဉီး‌ရေ၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှု အခြေအနေ လျော့ချရန်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဗြိတိသျှ တို့ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှ ၎င်း‌တို့၏ လွပ်လပ်ရေးကို ပိုမိုရယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်များပြည့်မှီရန်‌ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဗမာဘုရင်များ၏လက်အောက်တွင်ရှိခဲ့ဖူး‌‌သော ကျေးရွာများရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအဖွဲ့ များအား အလွန်တင်းကျပ်ထားသည့် ဗြိတိသျှ တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် အပြိုင် ‌အောက်ခြေဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် ၁၉၂၀‌ နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအနှံ့အပြားသို့ ပျံ့နှံ့လာသည့် ဝံသာနုအသင်း (ငါတို့လူမျိုးအသင်း)၏ မူဝါဒ များနှင့်အညီ အစိုးရ၏မူဝါဒများကို သပိတ်မှောက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် လူသိများသော ယဉ်‌ကျေးမှုတို့၏ အခြေခံသဘောတရားများ နှင့် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ချိတ်ဆက်လျှက်ရှိသည်။ ဆရာစံသည် ၁၉၂၅ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ကျေးရွာများအားလုံးလိုလိုတွင် တည်ရှိ‌သော ဝံသာနုအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်‌‌ယောက် ဖြစ်ပြီး GCBAမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာများကို နိုင်ငံတော် အဆင့်အထိ ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန်နှင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် ငြင်းဆန်ခြင်း ကဲ့သို့သော ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေး၏မူဝါဒများကို ထိထိရောက်ရောက်စိန်ခေါ်သည့် ကျေးရွာအခြေပြုအရေးတော်ပုံများဖြင့် ဝံသာနုအသင်းကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် ၁၉၂၂ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသော ဗြိတိသျှတို့၏ ပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင် ၆.၇၁%သာမဲရုံကို သွားသဖြင့် မဲပေးမှုရာခိုင်နှုန်းကို ကျဆင်း‌‌စေပြီး အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ အစိုးရလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား တိတ်ဆိတ်စွာငြင်းဆိုမှုအပြင် အခွန်သပိတ်မှောက်ခြင်း နှင့် ပူး‌ပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိသည့် အခြား‌‌ပုံစံများကိုလည်း အစိုးရဌာနများမှ အပြစ်‌ဒါဏ်ပေးခဲ့သည်။ ကိုလိုနီစီပွား‌ရေးမှ လွပ်လပ်စွာရပ်တည်နိုင်ရန် အသင်းမှ ဝံသာနု အမှတ်အသားပါ လက်လီအရောင်းဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် အလုပ်လုပ်‌ပေးနေသော မြန်မာလူမျိုးများကမူ ဆိုင်များဆီသို့မလာကြပေ။ ဘုန်းကြီးများသည်လည်း ဆိုင်များကို ဘာသာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ မပေးရန်တွန်းအား‌‌ပေးခြင်း ခံခဲ့ကြရသည်။ ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးမှ ဤအခြေအနေကို “နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုနှင့် တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင်များအားလုံးကို ဆန့်ကျင်ခြင်း” ဟုမှတ်ယူခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးတွင်ပါဝင်နေသော မြန်မာလူမျိုးများကို ဝိုင်းပါယ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် သပိတ်မှောက်မှုဆန့်ကျင်ရေး ဉပဒေကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဤတွင် “လွတ်လပ်ရေး” ၏ဆန့်ကျင်ဘက် အယူအဆ ၂ခုမှာ မြင်သာလာခဲ့သည်။
Saya San on the way to his execution
ဆရာစံသည် ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်‌ရေးကို ခုခံရန်အတွက် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေး၏ အပြိုင်တည်ဆောက်ပုံများ တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာကို အသုံးပြုကာ ကောင်းစွာ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အရေးတော်ပုံတွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနည်းလမ်းသည် ၁၉၂၉ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာ‌ရောက်လည်ပါတ်ခဲ့သော ဂန္ဒီ၏နည်းလမ်းဖြင့် ဆင်တူသည်။ ဖြစ်ရပ်မှန် လေ့လာမှုပေါင်း ၁၇၀ ပါဝင်သည့် လက်ရှိအခွန်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအပြီး ဆရာစံ၏အကြံပြုချက်များကို ထောက်ခံရန် GCBAမှ ငြင်းဆို‌သော အကျိုးဆက်အဖြစ် ဆရာစံ၏အမည်နှင့် ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော အကြမ်းဖက်ပုန်ကန်မှုများ ဖြစ်လာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ GCBAနှင့်၎င်းကိုထောက်ခံသည့် သံဃာ့အသင်းအတွင်း၌ ဂိုဏ်းဂဏ ကွဲပြားမှုကြောင့် ၁၉၂၉ ခုနှစ်ညီလာခံမတိုင်မီ ဝံသာနုအသင်း၏ မိခင်အဖွဲ့အစည်းသည်ပြိုကွဲခဲ့သည်။ GCBA ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ယခင်သပိတ်မှောက်မှု မဟာဗျူဟာကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် ဝံသာနုလှုပ်ရှားမှုများအား ပိုမိုအားကောင်းလာစေခဲ့သည်။ ဆရာစံတည်ထောင်ခဲသည့် ဂဋုန်အသင်းသည် တောင်သူလယ်သမားများ၏ လူထုမနာခံမှုကိုအဆုံးသတ်ရန် အစိုးရ၏ပြင်းထန်သော ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ဗြိတိသျှတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံအား “‌ခေတ်မှီ” စေရန်ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်တွင် ကျရှုံးကာ ၎င်းတို့၏ ခံနိုုင်ရည်ကို အလျော့ပေးလိုက်သော မြန်မာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခေါင်းဆောင်များကို ဆန့်ကျင်သည့် အောက်ခြေလူတန်းစား သပိတ်မှောက်သူများ၏ ပမာဏခြေလှမ်းကို ခုခံကာကွယ်သည့် ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆရာစံ၏ အဓိကအောင်မြင်မှုမှာ မြန်မာ့တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဆန္ဒပြမှုကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် အရေးတော်ပုံတစ်ခုအဖြစ် အလေးအနက်ထားစဉ်းစားသင့်ကြောင်း ပြသလိုက်နိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆရာစံ၏အမည်နှင့် ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော ၁၉၃၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ အရေး‌‌‌‌တော်ပုံသည် သူပုန်ခေါင်း‌‌‌‌‌ဆောင်အများအပြားအား တရားရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကြောင့် အခြား‌သော “ဆရာစံ” များမှဉီးဆောင်ခဲ့သည့် ပုန်ကန်မှု မီးတောက်၏အစပိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဆရာစံ၏ ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွပ်မျက်ခံရခြင်းတို့သည် နိုင်ငံခြားစီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားနှင့် ၎င်းနှင့် ဒွန်တွဲနေသောနိုင်ငံရေးစနစ် ကိုထမ်းဆောင်ရန်အတွက် ပြည်သူများကို ဖိနှိပ်သည့်စနစ်အစား မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားအများစု၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဦးတည်တိုက်ခိုက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံလွပ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲ၏ သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဆရာစံအရေး‌‌‌‌တော်ပုံကို ကိုလိုနီစနစ်နှင့် ၎င်း၏ဒွန်တွဲလျက်ရှိသော အရင်းရှင်စီးပွားရေးတို့အား ပြဠာန်းခြင်း၏‌ ‌‌‌နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သော ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း အကျိုးဆက်များကို ‌ဆန္ဒပြသည့် အစောပိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဆရာစံနှင့် ၎င်း‌၏အမည်ခံ အရေး‌‌‌‌တော်ပုံတို့ကို အလွန်ကွဲပြားစွာ သုံးသပ်မိပါသည်။ အဓိကသရုပ်ဖော်သည့် အစီအစဉ်တွင် မိရိုးဖလာနှင့်ခေတ်သစ်၊ ကျေးလက်နှင့်မြို့ပြ၊ အယူသီးမှုနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရား စသည့် ဆန့်ကျင်သောသဘောတရားရှိသည့် မျိုးအစားများကိုအသုံးပြုထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အမျိုးအစားခွဲခြားထားခြင်းသည် ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေး ၏အရေး‌‌‌‌တော်ပုံအပေါ် တရားဝင်အစီရင်စာတင်သွင်းသည့်အခါ အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ အမြင်တွင် လူထုအုံကြွမှုသည် တော်ဝင်မြန်မာတို့၏ ‌ရွှေထီးဆောင်းခဲ့သည့် အချိန်များကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် နောက်ပြန်လှည့်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် ဆရာစံ၏“နန်းတတ်ပွဲ”နှင့် သူ၏တောင်ပေါ်ရှိ“နန်းတော်” တို့သည် အဓိကကျ‌သော အခန်းကဏ္ဍမှနေ၍ ဖြစ်ရပ်များ၏သမိုင်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လွှမ်းမိုးနိုင်ပါသည်။ သီပေါမင်းအား နန်းချပြီး‌နောက်ပိုင်းတွင် ဗြိတိသျှတို့အား တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အရေး‌‌‌‌တော်ပုံများတွင် မင်းလောင်းဟူသောပုံရိပ်သည် အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအယူအဆသည် အုပ်ချုပ်သူတစ်‌‌ယောက်သည် ဘုန်းကံရှိရမည်ဟူ‌သော ယုံကြည်မှုအခြေခံပါသည်။ ဆရာစံသည် သူ့နောက်လိုက်များ၏အမြင်တွင် အရည်အချင်းအစစ်အမှန်ကို ပိုင်ဆိုင်သော်လည်း သူ၏အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာဘုရင်စနစ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သူ့ကိုယ်သူ သမ္မတ အဖြစ်မှတ်တွင်ခဲ့ပြီး သံဃာတော်များ၊ ပြည်သူလူထုနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများ၏ အကျိုးကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ဗြိတိသျှတော်လှန်‌ရေးကို လိုအပ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူ၏ ရာဇပလ္လင်အား စိန်ခေါ်သူမှ ဗမာလူမျိုးများကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ကိုလိုနီအာဏာဆန့်ကျင်ခြင်းကို တရားဝင်ဖြစ်‌စေရန် ဤ“မင်းလောင်း အာဘော်” ပြောင်းလဲခြင်းကို ဗမာ့လွပ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုလုပ်ဆောင်နေချိန်အတွင်း ဆက်လက်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ အနာဂတ်ဘုရင်တစ်ပါး ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဟူသော နှစ်ပေါင်းထောင်ချီမျှော်လင့်ချက်များက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား မြန်မာနိုင်ငံကို တရားမျှတမှုမရှိသည့် နိုင်ငံခြား ဉပဒေလွှမ်းမိုးမှုမှ လွတ်မြောက်စေသည့် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် မှတ်ယူစေရန် ကူညီခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဲ့သို့ပင် ဆရာစံသည်လည်း သြဇာသက္ကမရှိ‌သောခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များပြည့်ဝစေရန်အတွက် အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းအသုံးပြုရန် အခြေအနေများမှ တွန်းအား‌ပေးခြင်းခံရသူအဖြစ် သူကိုယ်သူမှတ်ယူထားပါသည်။ ထို့အပြင်၂‌‌ယောက်စလုံးသည် လူအများစု၏ဆန္ဒနှင့်တောင်းဆုများကို ကိုယ်စားပြုကြသည်။ ဆရာစံ၏ဖြစ်ရပ်တွင် သူတိုက်ရိုက် ဉီးဆောင်ခဲ့သော အရေး‌‌‌‌တော်ပုံသည် အလွန်အကန့်အသတ်ရှိပြီး အချိန်ကာလအားဖြင့် အလွန်တိုတောင်းလှသော်လည်း ရွာသားများ၏ အမျက်‌ဒေါသများ ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် အရေး‌‌‌‌တော်ပုံသည် နိုင်ငံ၏အခြားနေရာများသို့ ဆရာစံ၏တိုက်ရိုက် ခေါင်းဆောင်မှုမပါရှိဘဲ ပျံနှံ့သွားခဲ့ကြောင်း အချက်အလက်များမှ ‌‌ဖော်ပြနေပါသည်။
ဆရာစံအရေးတော်ပုံအတွက် လူထုစည်းရုံးရေးနည်းလမ်းများသည် မိရိုးဖလာလုပ်ဆောင်မှုများ ဖြစ်‌သော တက်တူးထိုးခြင်း၊ ကျမ်းကျိန်ဆိုခြင်းနှင့်သစ္စာရေသောက်ခြင်း ကဲ့သို့သောမှော်စွမ်းအားများ နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဆောင်ရွက်ချက် ၂ရပ်စလုံး လက်တွေ့ကျကျ အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် သူပုန်အုပ်စုများကို အတူတစ်ကွရှိစေပြီး လုံခြုံမှုနှင့် အကြောက်တရားကင်းမဲ့မှုတို့ကို ခံစားနိုင်အောင် ‌ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အတွေးအမြင်ကို ခေတ်သစ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြင့် သက်သေပြထားသည့် သူမ၏ ကျော်ကြားလှသော ဆောင်ပုဒ် “အကြောက်တရားမှလွတ်မြောက်ခြင်း” တွင်ဆရာစံနှင့် သူ၏နောက်လိုက်များက ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတမ်းအစဉ်အလာကို မှီခိုအားထားခဲ့ကြောင်း ထောက်ပြထားပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဆရာစံ၏ရည်မှန်းချက်များနှင့် ၎င်းတို့ကိုပြီးမြောက်စေသည့်နည်းလမ်းများမှာ ရိုးရာနှင့်ခေတ်သစ်ပုံစံများကိုပေါင်းစပ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်မှုကို ခုခံတွန်းလှန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆရာစံကို မြန်မာ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၏ စံနမူနာပြပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည် အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုလိုနီ‌ခေတ်မှစ၍ ယနေ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ထက်စာလျှင် ဆရာစံသည် တိုင်းပြည်၏ အထက်တန်းလွှာအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သော်လည်း ယနေ့အချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေအများစုကိုဖွဲ့စည်းထားသောတောင်သူလယ်သမားများ၏ကမ္ဘာ့အမြင်တွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ်လျက်ရှိသည်။ လွတ်လပ်ရေးမတိုင်မီ အချိန်အတန်ကြာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို လွှမ်းမိုးခဲ့သောနိုင်ငံရေးသမားနှစ်ဦးသည် ဆရာစံကွယ်လွန်ပြီးနောက် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် ဆရာစံ၏ ကျော်ကြားမှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒေါက်တာဘမော်သည် ၁၉၃၅ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဉပဒေအရ ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်ပြီး ဆရာစံ၏အဓိကကာကွယ်ရေးရှေ့နေလည်းဖြစ်သည်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီး‌နောက် ထိုရုံးခန်းကို ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့သော ဦးစောသည် ကာကွယ်ရေးတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်သူနှင့် သူ၏ကိုယ်ပိုင်တပ်မတော်အတွက် ‚ဂဋုန်‘ ဟူသောအမည်ကို မှည့်တွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အောင်ဆန်းကိုလုပ်ကြံရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုလိုနီသမိုင်းရှိ ဤအရေးပါသောအဖြစ်အပျက်ကို နားလည်ရန်အတွက် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်းကြောင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေး‌သော သုတေသီများမှ ဆရာစံအား ‌လေးစားခဲ့ကြသည်။ ဤလေ့လာမှုသည် လူကြိုက်များသောသူရဲကောင်း အမည်ခံ အရေး‌‌‌‌တော်ပုံကို အာရုံစိုက်ခြင်းသည် ဆရာစံ၏ ဘဝကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးပုံရသည်ဟု ‌ဖော်ပြနေသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေတ်သစ်သမိုင်းတွင် လူထုအုံကြွမှု အများအပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့‌သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအတ္ထုပ္ပတ္တိတွင် ဆရာစံအရေးတော်ပုံ နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်များနှင့်ဆောင်းပါးများစွာရှိသည့် အနက်အောက်ပါတို့ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။
စာရေးဆရာ Maitrii အောင်သွင် ရေးသားခဲ့သော The Return of the Galon King 2011. History, Law, and Rebellion in Colonial Burma. Athens, Ohio University Press.
စာရေးဆရာ မောင်မောင် ရေးသားခဲ့သော From Sangha to Laity 1980. Nationalist Movements of Burma, 1920-1940. New Delhi, Manohar.
Prager, Susanne 2003 Coming of the “Future King”: ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီ နှင့်စစ်ပွဲကာလအတွင်း မြန်မာ့မင်းလောင်း မျှော်လင့်ချက်များ Journal of Burma Studies 8: 1-32.
 ၂ခုစလုံးသည် အမည်မတူသည့် အိမ်ထောင်စုအခွန်အခများဖြစ်ကြသည်။
 စာရေးဆရာ မောင်မောင် ၁၉၈၀ မှ ကိုးကားထားပါသည်။
 Statement of Mr. Lewinson in his introduction of the Anti-Boycott Bill on 21 February 1922 (Proceedings of the Legislative Council p. 948).
 The Burmese word foramonk – hpon-gyi – means “great merit”
 ဤခေါင်းစဉ်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာစာသားဖြစ်သောအဂ္ဂင်သာသုတ်အရလူသားတို့၏သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအုပ်ချုပ်သူ (မဟာသမ္မတ) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤသမ္မတသည် တရားဉပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီနားလည်မှုအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုအဖြစ်အပျက်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Autor Rodion EbbighausenVeröffentlicht am 30. Mai 2020 20. Juni 2020 Kategorien UncategorizedSchreibe einen Kommentar zu ဆရာစံ (1876-1931)
ဦးဖေမောင်တင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ပါ အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ရှားပါးမြန်မာပညာရှင်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားသည့် စာပေတွင်လည်းကောင်း၊ သူ့လက်ရာများနှင့် အရည်အချင်းကို မကြာခဏ တန်ဖိုးထားမြှောက်စားကြသည်။ ထိုစဥ်က ဦးဖေမောင်တင်အနေဖြင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်ခဲ့စဥ် (၁၉၂၀) နှင့် (၁၉၃၀) ပြည့်လွန်နှစ်များ ဖြစ်သည်။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ အချို့သော မြန်မာမိတ်ဆွေ၊ ဗြိတိသျှမိတ်ဆွေများနှင့်အတူ၊ မြန်မာ့ရိုးရာများကို နိုင်ငံတကာတွင် ခေတ်ပြိုင်ဆန်းသစ်လာမှု၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် တွေ့ထိစေလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးဖေမောင်တင်ကို (၁၈၈၈) ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၄)ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်အရပ်၌ ဖွားမြင်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဖေသည် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ဆေးကုဌာန၏ ရုံးအုပ်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ မိခင်မှာ ဒေါ်မြိုင်ဖြစ်သည်။ မိဘနှစ်ပါးလုံး မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှ ဘတ်ပတစ်စ်ခရစ်ယာန်များ ဖြစ်ကြသည်။ ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်ကို ရေးသားပြုစုခဲ့သူ၊ သမ္မာကျမ်းစာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့သူ ဦးထွန်းငြိမ်းမှာ ဦးဖေမောင်တင်၏ ဖခင်ဘက်မှ ဦးလေးတော်စပ်သည်။ မိခင်ဘက်မှ အဘိုးမှာ အထက်မြန်မာပြည်သံဃာတို့၏ ထိပ်ခေါင် တောင်ခွင်းဆရာတော် ဖြစ်သည်။ ငယ်နာမည်မှာ မောင်တင်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင်မှ ဖခင်၏ နာမည်ကို ထပ်မံပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။
ခရစ်ယာန်မိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသော်လည်း၊ (၁၈၉၃)ခုနှစ်မှ (၁၈၉၆)ခုနှစ်အထိ ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေများ သင်ကြားပို့ချသည့် အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းတွင် မူလတန်းပညာကို သင်ယူခဲ့သည်။ (၁၈၉၆)ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး၊ အသက် (၁၄)နှစ်အရွယ်တွင် ပထမဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ရပြီးနောက် ရရှိလာသည့်ဆုများသည်လည်း တိုးပွားလာခဲ့သည်။ အသက် (၁၅)နှစ်အရွယ်တွင် “ကျောင်းသားများ နိုင်ငံခြားသားဆရာများကို လက်အုပ်ချီနှုတ်ဆက်ရသည့်” ဓလေ့ကို ဆန့်ကျင်ရန် သပိတ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုအမိန့်ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းရသည်။ (၁၉၀၆)ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ကောလိပ်ကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ပါဠိဘာသာကို လေ့လာသင်ကြားခဲ့ကာ၊ (၁၉၁၁)ခုနှစ်တွင် မဟာဘွဲ့ကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်သည်။ တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက် ရာထူးတိုးသွားသည့် သူ့ဆရာဥရောပသားတစ်ဦးနေရာတွင် စာသင်သည့် ပါမောက္ခဖြစ်လာသည်။
ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်စကတည်းက ဦးဖေမောင်တင်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံခြားမှ ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ (၁၉၁၀) ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသနအသင်း ဂျာနယ်၏ တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ဂျာနယ်အတွက် ဆောင်းပါးအမြောက်အများ ရေးသားခဲ့သည်။ သူ၏ ပထမဆုံးဆောင်းပါးမှာ “ခရစ်ယာန်သာသနာပြု မြန်မာစာ” ဟု အမည်ရပြီး၊ နိုင်ငံခြားမှ လာရောက်သည့် သာသနာပြုများ၏ ဘာသာဗေဒအရည်အချင်းကို ဝေဖန်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ (၁၉၁၁)ခုနှစ်ထုတ် ပထမဆုံးဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခံရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်၏ ပထမအယ်ဒီတာအဖြစ် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး၊ (၁၉၁၂)ခုနှစ်တွင် အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပါဠိဘာသာပါမောက္ခအနေဖြင့် လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက် ပါဠိစာပေအသင်းနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပြီး၊ (၁၉၁၆)ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ပါဠိကျမ်းရင်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို တည်ထောင်သည့် (၁၉၂၀)ပြည့်နှစ်တွင် လန်ဒန်မြို့သို့ သွားရောက်ပြီး၊ (၁၉၂၄)ခုနှစ်အထိ အောက်စ်ဖို့ဒ်နှင့် လန်ဒန်တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ လန်ဒန်မြို့ ပါဠိစာပေအသင်းနှင့် အသင်းဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသည့် Thomas (၁၉၂၂ ခုနှစ် ကွယ်လွန်သည်အထိ)၊ Caroline Rhys Davies တို့နှင့် ဦးဖေမောင်တင်၏ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်မှုက ပိုမိုနီးကပ်လာခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ရှိနေစဥ်အတောအတွင်း မှန်နန်းရာဇဝင်တော်ကြီးကို ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည်။ မှန်နန်းရာဇဝင်တော်ကြီးကို (၁၉)ရာစုအစောပိုင်း၊ အမရပူရနန်းတွင်းတွင် ပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးဖေမောင်တင်၏ ဘာသာပြန်ကို (၁၉၂၃)ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသည်။ ထိုဘာသာပြန်မူကို (၁၉၁၁)ခုနှစ်ကတည်းက ရန်ကုန်မြို့တွင် အင်္ဂလိပ်စာပေပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် Gordon C. Luce (၁၈၈၉-၁၉၇၈) နှင့်အတူ တွဲဖက်ပြန်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (၁၉၁၅)ခုနှစ်တွင် ပါမောက္ခ Gordon C. Luce က ဦးဖေမောင်တင်၏ နှမဖြစ်သူနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သည်။ မှန်နန်းရာဇဝင်တော်ကြီးကို ဘာသာပြန်ဆိုမှုက ဦးဖေမောင်တင်အနေဖြင့် သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်ကို ပြသနေသည်။ ပါမောက္ခ Luce နှင့် ဦးဖေမောင်တင်တို့မှာ ကာလရှည်ကြာပေါင်းသင်းလာကြသည့် မိတ်ဆွေများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦး၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းက Luce ကို မြန်မာ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး ဖြစ်လာစေသည်။ ပါဠိစာများကို ဘာသာပြန်ရာတွင်လည်း ဦးဖေမောင်တင်က အခြေခံမူကြမ်းကို ပြန်ဆိုပြီး၊ သူ့ယောက်ဖဖြစ်သူက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအသုံးကို ချောမွေ့စေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်လာပြီးနောက် ပါမောက္ခတာ၀န်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ပါဠိဘာသာနှင့် မြန်မာဘာသာကို လေ့လာခြင်းများ ပါဝင်သည့် “အရှေ့တိုင်းဘာသာဌာန” ကို တက္ကသိုလ်တွင် တည်ထောင်ရန် အုတ်မြစ်များ ချခဲ့သည်။ သူ့သင်ခန်းစာများ၏ အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ “ခေတ်စမ်း” စာပေလှုပ်ရှားမှု ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ “ခေတ်စမ်း”စာပေလှုပ်ရှားမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာပေလှုပ်ရှားမှုအသစ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၊ ဦးဖေမောင်တင်၏ တပည့်အချို့ ခေတ်မီ ခေတ်ရှေ့ပြေးသည့် ပုံစံဖြင့် ရေးသားသည့် ဆောင်းပါးများ၊ ဝတ္ထုတိုများနှင့် ကဗျာများဖြင့် လှုပ်ရှားမှုကို စတင်ခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဘက်တွင်လည်း ဦးဖေမောင်တင်က မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းကို တွဲဖက်တည်ထောင်သူ John S. Furnivall ကို ထောက်ခံကူညီခဲ့သည်။ John S. Furnivall က နိုင်ငံ၏ အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပညာရေးအသိသညာဖြင့် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအားဖြင့် တိုးတက်မြှင့်တင်ပေးရန် အားထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို ဦးဖေမောင်တင်က ကူညီအားပေးခဲ့သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ကို ရောက်မီရန် ပထမလုပ်ဆောင်ချက်မှာ (၁၉၂၅)ခုနှစ်မှ စပြီး The World of Books ကို လစဥ် ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ်မှာ (၁၉၂၈)ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံပညာပြန့်ပွားရေးအသင်းကို တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အသင်းက စာဖတ်ဝိုင်းများ တိုးပွားစေရန် မြှင့်တင်ကူညီပြီး၊ လစဥ်ထုတ်စာစောင်များတွင်လည်း လူများပါဝင်ရေးသားကြရန် အားပေးခဲ့သည်။
(၁၉၂၈)ခုနှစ်တွင် ဧဝံဂဲလိဘုရားကျောင်းတွင် Edith ဟုခေါ်တွင်သည့် ဒေါ်ကြည်ကြည်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး၊ သမီးနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။
(၁၉၃၇)ခုနှစ်တွင် ဦးဖေမောင်တင်သည် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွင် ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုး ဖြစ်လာသည်။ ဂျပန်တို့ ဝင်သိမ်းစဥ်တွင် တက္ကသိုလ်အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၄၆)ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘာသာဗေဒ၊ စာပေနှင့် သမိုင်းနယ်ပယ်တို့တွင် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးအကြောင်း ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။ သူရေးသားခဲ့သည့် ဆောင်းပါးပေါင်း ၂၂၇ ပုဒ်ရှိသည်ဟု မှတ်တမ်းရှိသည်။
ဦးဖေမောင်တင်သည် (၁၉၅၇)ခုနှစ်မှ (၁၉၅၈)ခုနှစ်အထိ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို သင်ကြားပို့ချပေးရန် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်က သူ့အား ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ (၁၉၅၉)ခုနှစ် မေလတွင်၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့၌ ကျင်းပသည့် အရှေ့အာရှခရစ်ယာန်ကောင်စီ၏ ညီလာခံဖွင့်ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် မြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးကျော်သန်းကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ (၁၉၇၃)ခုနှစ်တွင် အသင်းကြီး၏ အမည်ကို အာရှခရစ်ယာန်ကောင်စီ (CCA) အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုပြီး၊ ယနေ့အချိန်တွင် အာရှနိုင်ငံများမှ အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုထားပါသည်။ ထို့နောက် ဦးဖေမောင်တင်သည် ယဥ်ကျေးမှုနှီးနှောဖလှယ်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၆၁)ခုနှစ်တွင် အရှေ့တောင်အာရှ၏ ပထမဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ-ခရစ်ယာန်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို အရှေ့အာရှခရစ်ယာန်ကောင်စီက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်သန်း၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Holy Cross ကောလိပ်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ၄င်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးဖေမောင်တင်က အနောက်တိုင်းမှ သာသနာပြုများ၏ ယဥ်ကျေးမှုရှုထောင့်၊ ချဥ်းကပ်ပုံကို ဝေဖန်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲက (၁၉၆၁)ခုနှစ် နယူးဒေလီမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘုရားကျောင်းများကောင်စီ၏ ညီလာခံတွင် အာရှအကြောင်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးရာ၌ အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခု အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ အဆိုပါ ညီလာခံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘုရားကျောင်းများကောင်စီက အာရှတွင် ပထမဆုံးကျင်းပသည့် ညီလာခံလည်း ဖြစ်သည်။
(၁၉၆၀)မှ (၁၉၆၄)ခုနှစ်အထိ ဦးဖေမောင်တင်သည် မြန်မာ့သမိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းရေးသားပြုစုရာတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်အသင်းကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၆၈)ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းက သူ၏ အသက် (၈၀)ပြည့်မွေးနေ့ကို ကန်တော့ပွဲသဘင်ဖြင့် အထူးတလည် ကျင်းပခဲ့သည်။ အငြိမ်းစားယူပြီးသည့်နောက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Holy Cross ကောလိပ်တွင် ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Holy Cross ကောလိပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းကျမ်းစာသင်ကျောင်းများထဲမှ တစ်ကျောင်းဖြစ်ပြီး၊ ဧဝံဂဲလိဘုရားကျောင်းလက်အောက်တွင် ရှိသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဖေမောင်တင်သည် မြန်မာခရစ်ယာန်ကောင်စီကို တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ခရစ်ယာန်စာပေအသင်းကို တာဝန်ယူခဲ့သည်။ မြန်မာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများကောင်စီ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာရေးကော်မရှင်တွင် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ယူခဲ့သည်။
(၁၉၇၃)ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၂)ရက်တွင် ဦးဖေမောင်တင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၃။ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ရရှိအောင်မြင်ခဲ့သည်များ
ဦးဖေမောင်တင်သည် “ယဥ်ကျေးမှုများ တိုးတိုက်မိခြင်း”ကို အထူးတလည်သတိပြုသူ ဖြစ်သည်။ ဥရောပကိုလိုနီဝါဒ၊ ယဥ်ကျေးမှုတို့နှင့် နိုင်ငံရေးအရ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ခြင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နောက်ခံ ခရစ်ယာန်ဝါဒနှင့် ဘာသာရေးအရ တွေ့ထိကြခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် သူ့တုံ့ပြန်မှုမှာ သူ့နိုင်ငံ၏ သမိုင်းနှင့် ယဥ်ကျေးမှုကို တစိုက်မတ်မတ် စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ယဥ်ကျေးမှုနှစ်ခုဖြတ်မျဥ်း (ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်နေခြင်း) ပေါ်တွင် ရှိနေသည့် သူ၏ ဖြစ်တည်မှုကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ကိုလိုနီစနစ်ကို ဆန့်ကျင်သည့် မျိုးချစ်စိတ်ကို ထောက်ခံရာတွင် အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိခြင်း၊ နားလည်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းတို့အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့် ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည်။
ကိုလိုနီစနစ်က မြန်မာ့ယဥ်ကျေးမှုကို စိမ်ခေါ်လာသည့်အခါ သူ တုံ့ပြန်လိုက်သည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဥ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား၏ အရေးပါမှုကို အလေးအနက်ပြုပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာပေနှင့် အသိဉာဏ်အဝန်းအဝိုင်းတစ်ရပ်ကို တည်ထောင်ပြီး၊ နိုင်ငံ၏ ဓလေ့များနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ဓလေ့များ ကူးလူးဆက်ဆံစေခြင်း၏ အရေးပါပုံကိုလည်း အလေးအနက်ထားခဲ့သည်။ ထိုအတွက်ကြောင့်ပင် ဦးဖေမောင်တင်က သူအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံး မြန်မာဘာသာစကားနှင့် စာပေအဆင့်ပိုမိုမြင့်မားစေရေးအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့အောင်မြင်မှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ မည်သည့်ကျောင်းတွင်မဆို၊ အစိုးရကျောင်းဖြစ်စေ၊ မစ်ရှင်ကျောင်းဖြစ်စေ၊ မြန်မာစာကို မသင်မနေရသင်ရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအနေဖြင့် ပါဠိ၊ မြန်မာစာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာယဥ်ကျေးမှုတို့ကို မလေ့လာခြင်းအတွက် ဦးဖေမောင်တင်က ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ကိုလိုနီခေတ် အနောက်တိုင်းဆန့်ကျင်ရေးဝါဒများကို မျက်နှာသာပေးလိုက်လျောရမည့်အစား၊ ဦးဖေမောင်တင်က ယဥ်ကျေးမှုနှစ်ခုကို တွေ့ဆုံပေးရန် စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။
ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ယဥ်ကျေးမှုများ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ကြရာ၌ ကြားခံအဖြစ် ဘာသာစကား၏ အခြေခံကျ၊ အရေးပါလှသည့် အခန်းကဏ္ဍကို အတွင်းကျကျ ထပ်မံလေ့လာခဲ့သည်။ (၁၉၅၄)ခုနှစ် မတ်လတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဘာသာဗေဒစည်းဝေးပွဲတစ်ရပ်ကို သုံးရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများအကြား၊ မတူညီသည့် ဘာသာဗေဒအုပ်စုများနှင့် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအကြားက ယဥ်ကျေးမှုကွဲပြားချက်များကို ပေါင်းကူးပေးမည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် ဘာသာဗေဒကို အသုံးချရန်ဖြစ်သည်။ ဦးဖေမောင်တင် ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့ဟန်ရှိသည့်၊ သို့တည်းမဟုတ် သူ့ရည်ရွယ်ချက်များ ပါဝင်လျက်ရှိသည့် သတင်းစာဆောင်းပါးတစ်ရပ်က ထိုအစည်းအဝေးကို အနှစ်ချုပ်ဖွင့်ဆိုထားသည်မှာ။ ။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိတွင် ဘာသာဗေဒ၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အလွန်ပင် စိတ်ဝင်စားလှပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄င်းရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များမှာ ကျွန်ုပ်တို့ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အသစ်များအတွက် အင်မတန်မှ အထောက်အကူဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ ထိုတွေ့ရှိချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအဖြစ် သင်ကြားပို့ချခြင်းဖြစ်သည်။ (…) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် (…) ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိ လူအများကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးရခြင်း၏ အကျိုးအထိရောက်ဆုံးကိစ္စကို ရှာဖွေရပေမည်။ ထိုမှသာ သင်ကြားသူတို့အနေဖြင့် ဘာသာစကားသင်ကြားရာတွင် အလုပ်ဖြစ်မည့်အသိသညာကို အချိန်တိုအတွင်း ရရှိနားလည်ပေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံအတွင်းရှိ မူလဘူတဒေသိယဘာသာစကားများကို လေ့လာ၊ အဆင့်ခွဲသတ်မှတ်ရာတွင်လည်း ဘာသာဗေဒက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာလည်း အင်မတန်အရေးကြီးလာသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာဗေဒသည် လူအစုအဖွဲ့များ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ဆက်သွယ်ကြသည်ကို ပြသသည့်၊ အရှုပ်ထွေးဆုံး သို့သော် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည့် ဘာသာစကားကို နားလည်နိုင်ရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်တော့သည်။(၁)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာစကားပေါင်းစုံတို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရေးလိုအပ်ချက်သည် ဘာသာဗေဒသုတေသနနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိကြောင်း ဆောင်းပါးတွင် ပြဆိုထားသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ကျောင်းများ၌ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ဒုတိယဘာသာစကားအဖြစ် သင်ကြားပို့ချရန် လိုအပ်ချက်လည်း ပါဝင်ထည့်သွင်းထားသည်။
ဦးဖေမောင်တင်သည် မြန်မာ့ရိုးရာနှင့် အနောက်တိုင်းခေတ်မီခြင်းကို ရင်ကြားစေ့နိုင်ရန် ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းများကို အသုံးချကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ပညာရှင်၊ ဆန်းသစ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်း၏ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်လှသည့် ပညာရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် မြန်မာ့ယဥ်ကျေးမှုစရိုက်လက္ခဏာများ မပျောက်မပျက်စေဘဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာနှင့်ဆက်သွယ်ပေးရန် ကြိုးပမ်းသည့် စာပေများအပေါ်တွင် ဩဇာသက်ရောက်မှုရှိသည်။
မြန်မာ့ရိုးရာများကို အနောက်တိုင်းခေတ်မီခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ပေးရန် ဦးဖေမောင်တင်၏ ကြိုးပမ်းမှုကို ငယ်ရွယ်သည့်၊ နောက်ပိုင်းတွင် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု၏ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာကြမည့် တော်လှန်ရေးသမားများက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာလျှင် ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ အခြေခံထားသည့် ယဥ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးဆိုသည်မှာကား မြန်မာနှင့် အနောက်တိုင်း၏ “စာအုပ်ကမ္ဘာများ” အပြန်အလှန် ပြောဆိုဆက်ဆံကြခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ မျက်မှောက်ခေတ်အသိပညာနှင့် စာပေကို “မြန်မာမှုပြုခြင်း”ပင် ဖြစ်သည်။ သခင်လှုပ်ရှားမှုတွင် အသက်ငယ်ငယ်ဖြစ်ကြသည့် သခင်နု၊ သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်းနှင့် သခင်အောင်ဆန်းတို့က နဂါးနီစာအုပ်အသင်းကို တည်ထောင်ပြီး၊ ယဥ်ကျေးမှုကို သုံးကာ နိုင်ငံရေးအရတော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ကို တွန်းအားပေးသည့် စာအုပ်မျိုးကိုသာ မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။(၂) ဥရောပတွင် စစ်ပွဲကြီးစတင်သည့်အခါ ဤအဖွဲ့က ကလောင်တံများအစား၊ ဓားများပြောင်းကိုင်ကာ စစ်တပ်အကူအညီဖြင့် လွတ်လပ်ရေးကို ရယူခဲ့သည်။
သခင်များနှင့် သခင်များကို ထောက်ခံသူများ၏ စာပေနှင့် နိုင်ငံရေးအရ အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် နှိုင်းယှဥ်ကြည့်မည်ဆိုပါက ဦးဖေမောင်တင်၏ ယဥ်ကျေးမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို “လူမျိုးစွဲမထားခြင်း” ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အခြေအမြစ်ခိုင်သည့် ယဥ်ကျေးမှုအခြေခံတစ်ရပ်ကို ရှာဖွေပြီး၊ ရောနှောထားသည့် ယဥ်ကျေးမှုများကို ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်များနှင့် ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာများ၏ ဒေသနာများတွင်ပါ ထည့်သွင်းအသုံးပြုစေခဲ့သည်။
ဤသဘောထားကို မြန်မာစာပေနှင့် ယဥ်ကျေးမှုအပေါ် သူ၏ ချစ်မြတ်နိုးမှု၊ ဥရောပ၏ အသိဉာဏ်ရှာဖွေခြင်းအပေါ် ထင်မြင်ယူဆချက်တို့တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သူ၏ ဤသဘောထားသည် မည်သည့်အခါကမျှ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးယဥ်ကျေးမှု၏ ပင်မရေစီးကြောင်းကို ကိုယ်စားမပြုချေ။ ထိုယဥ်ကျေးမှုကိုကား ကိုလိုနီခေတ် နိုင်ငံတွင်း၊ နိုင်ငံပြင်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး မကြာမီ စတင်ခဲ့သည့် ပြည်တွင်းစစ်တို့က ပြဌာန်းပါလိမ့်မည်။
(၁၉၆၂)ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် လောကီချည်းသပ်သပ်တည်သည့်၊ တစ်ပါတီအာဏာရှင်အုပ်စိုးသည့် နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ “မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်” လမ်းစဥ်သည်ကား မြန်မာ့ယဥ်ကျေးမှုကိုတင်မက၊ မြန်မာတို့ဘဝ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပါ ဇာတ်လမ်းဆန်ဆန် အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ တင်းကြပ်လှသည့် နိုင်ငံရေးအရ ကြားနေမှုလမ်းစဥ်နှင့် စီးပွားရေးအရ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်ရေးဝါဒတို့ကို သုံးကာ မြန်မာ”ပြည်ထောင်စုယဥ်ကျေးမှု”ကို မြှင့်တင်သည့် “ပြောင်းလဲမှု” ဖြစ်စဥ် ဦးဖေမောင်တင်ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု မရှိခဲ့ပါ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ယဥ်ကျေးမှုနှီးနှောဖလှယ်ခြင်းကို အစိုးရက အားပေးခြင်းမပြုတော့ပေ။
ပြောင်းလဲမှုအသစ်၏ အကျိုးဆက်များကို ခံစားရသည်မှာ အခြားသူများဖြစ်ကြသည်။ (၁၉၆၄)ခုနှစ်တွင် ဦးဖေမောင်တင်၏ ယောက်ဖဖြစ်သူ Gordon Luce အနေဖြင့် နိုင်ငံထဲမှ ထွက်သွားရန် အမိန့်ပေးခံရသည်။ ဦးဖေမောင်တင်၏ နှမဖြစ်သူကိုမူ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတွင်း၌ပင် ဆက်လက်နေထိုင်ရန် ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း၊ သူ့ခင်ပွန်းနောက်ကိုသာ လိုက်ပါခဲ့သည်။ Luce ၏ စာကြည့်တိုက်ကြီးကို အာဏာပိုင်များက သိမ်းယူခဲ့ပြီး၊ ဦးဖေမောင်တင်၏ နှမဖြစ်သူ ဒေါ်တီတီသည် လက်ထပ်လက်စွပ်ကိုပင် ချွတ်ခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတွင်းမှ မည်သည့်လက်ဝတ်ရတနာမှ ယူဆောင်သွားခြင်း မပြုရဟူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။(၃) သူ့မိတ်ဆွေနှင့် သူ့နှမအပေါ် ထိုသို့ ခက်ထန်စွာ ဆက်ဆံခံရမှုကို ဦးဖေမောင်တင်အနေဖြင့် မည်သို့တုံ့ပြန်ခဲ့သည်ကို မသိရပါ။ (၁၉၇၇)ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းနှင့် အသင်းထုတ်ဂျာနယ်ကို ပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရသည်ကိုလည်း သူမသိလိုက်ရပါချေ။
ယနေ့အချိန်တွင် ဦးဖေမောင်တင်ကို ရှားရှားပါးပါး ပါရမီရှင်တစ်ဦးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြည်ညိုလေးစားကြလေသည်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများ၏ အနောက်တိုင်းအပေါ်ဝေဖန်မှုများအကြား ချဥ်းကပ်လေ့လာရန်ကိုလည်း ယနေ့ခေတ်ပညာရှင်အများအပြား အားမထုတ်ကြတော့ပါ။ သူ့နည်းလမ်းကို မလိုက်နာကြတော့ပါ။ “လူမျိုးစွဲ၊ နိုင်ငံစွဲ ကင်းစွာ” မြန်မာနှင့် အနောက်ယဥ်ကျေးမှုများကို ရင်ကြားစေ့ပေးလိုသည့် ဦးဖေမောင်တင်၏ ကြိုးပမ်းမှုမှာ ယနေ့ထိတိုင် အကောင်အထည်မပေါ်သေးပါချေ။
အန်နာ အလော့ထ် (၂၀၀၄) ပါမောက္ခ ဖေမောင်တင် (၁၈၈၈-၁၉၇၃)။ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သည့် မြန်မာပညာရှင်တစ်ဦး၏ ဘဝနှင့် လက်ရာ။ The Journal of Burma Studies (၉)၊ ၁၁-၃၄
ခင်ထွေးရီ (၂၀၁၆)၊ ဦးဖေမောင်တင် အတ္ထုပတ္တိ (http://www.emw-d.de/fix/files/37%20biographies_myanmar.pdf)
(၁) အလော့ထ် ၂၀၀၄။ ၂၉-၃၀
(၂) နဂါးနီစာအုပ်အသင်းမှ ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်များအကြောင်း လေ့လာချက်များကို မြန်မာစာပေပရောဂျက်တွင် အသေးစိတ်ထပ်မံလေ့လာနိုင်ပါသည်။ http://www.phil.uni-passau.de/suedostasien/wissenschaftsnetzwerke/wissenschaftsforum-myanmar/myanmar-literature-project/
(၃) ဟောလ် (၁၉၇၉)။ ၅၈၅
Autor Rodion EbbighausenVeröffentlicht am 10. Mai 2020 22. Juli 2020 Kategorien UncategorizedSchreibe einen Kommentar zu ဦးဖေမောင်တင် (၁၈၈၈-၁၉၇၃)